Ndechipi chinzvimbo chikuru cheCalcium Chloride muAgaculture
Karusiyamu Chloride dihydrate ndiyo yakanakisa mumiririri kudzikisa kukosha kwePH kwedziva mune aquaculture. Iyo yakakosha PH kukosha kwemhuka zhinji dzemumvura mumadziva eacaculture haina kwayakarerekera kune alkaline zvishoma (PH 7.0 ~ 8.5). Kana iwo pH ukoshi hwanyanya kukwirira zvakanyanya (PH≥9.5), zvinotungamira mukushushikana kwekuita suc ...
Kukudzidzisa Iwe kusiyanisa Calcium Chloride Dihydrate kubva kuCalcium Chloride Anhydrous.
Calcium Chloride, munyu unoumbwa nezvinhu zveChlorine neCalcium, iyo kemikari fomura CaCl2, isina kuchena cubic crystal, chena kana off-chena, granular, idenderedzwa, isina kujairika granular, hupfu. Isinonhuwirira, kuravira zvishoma. Iyo inowanzo iri ionic halide uye iri chena yakasimba mukamuri temperat ...
Kunyorera kweSodium Sulfite isina mvura muPepa Indasitiri
Pepa indasitiri ndiyo hombe mutengi weSodium Sulfite zvigadzirwa. Sodium Sulfite ndiyo imwe yenzira dzinokosha dzekumapepa muindasitiri yekugadzira mapepa, kunyanya inokodzera kusapuruzira huni. Zvakanakira iyi nzira yekupururudza ndeyakajeka ruvara, kushomeka kwekushandisa kweiyo bleaching mumiriri uye imwe ch ...
Inenge zana makemikari hofori "akabatana" kumisa kugadzirwa! Kukwira kwemitengo kunogona kutora kwemimwe mwedzi mitatu kusvika kumatanhatu!
Rimwe fungu harimire, rimwe rinokwira! Anoda kusvika zana emakambani emakemikari anotungamira "akabatana" akamisa kugadzirwa! Uku kusaenzana pakati pekupihwa uye kudiwa kwemakemikari musika, kwakanyanya! Rutsva rutsva rwemitengo inomuka inogona kutanga! Zvinonzwisisika kuti parizvino, pane angangoita zana makemikari ...
Sodium metabisulfite mitengo iri kusimuka nekukurumidza nesoda soda nesarufa
MunaNdira, mudzimba Soda Ash, Sarufa mitengo izvo zvinhu zvikuru zvekushandisa zveSMBS zvakaramba zvichikwira. Ichitsigirwa nemari mbishi yezvinhu, vamwe vagadziri vakawedzera zvishoma mutengo wemusika weSodium Metabisulfite, epamba Sodium metabisulphite mitengo yemusika yakapera ingangoita mwedzi mitatu yekuenderera ...
Chemical Zvekushandisa uye Zvigadzirwa zvakakwira zvina muzana muna Kukadzi kubva pagore rapfuura
China yemugadziri wemutengo indekisi (PPI) yakakwira 1.7 muzana gore-ne-gore muna Kukadzi 2021, yakakwira 0.8 muzana mwedzi-pamwedzi, sekureva kweNational Bureau ye Statistics (NBS) munaKurume 10 Kutenga mitengo yevagadziri vemaindasitiri kwakakwira 2,4 muzana gore-pagore uye 1.2 muzana mwedzi-pamwedzi. Pane mo ...
"Iyo isina-chepfu uye isina njodzi Baking Soda (Sodium Bicarbonate) yakavharirwa mune yakachengeteka nano 'kapsule' (liposome), uye tetracycline ine simba-rinosunga pfupa rakaiswa pamusoro pevhu kushambadzira kune iro bhonzo pamusoro. tishu nekuvanza acid, vanogona ...
1. Kutsunga kwe Sodium Hydroxide Kwemwedzi miviri, ma reagents maviri akaedzwa zvakafanana achiongorora muyenzaniso kumutengi. Mhedzisiro yekuongororwa kweiyo yakaderera Sodium Hydroxide zvemukati zvainyatsoenderana, nepo kutsauka kweiyo yakakwira sodium hydroxide zvemukati yaive w ...
Muna 2014, kugadzirwa kweSodium Metabisulfite kuChina kwaive matani mazana masere nemakumi masere nemashanu ezviuru, uye mugore ra2020 kugadzirwa kweSodium Metabisulfite kuChina kwakawedzera kusvika pamatani emamiriyoni 1,795. Kubva 2014, iyo mukomboni kukura mwero weSodium Metabisulfite kugadzirwa muChina yaive 10,62% .China chinodikanwa cheSodium Meta ...
Mgcl2 Yakasimba, Barium Chlorie Kurapa Kwemvura, Yakanakisa Magnesium Flakes, Cabr2, Sodium Ash, Mushaba Ash Price,